गर्भवती हुँदा यात्राको लागि उत्तम सुझावहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > गर्भवती हुँदा यात्राको लागि उत्तम सुझावहरू
गर्भवती हुनु तपाईंको जीवनको सबैभन्दा रमाइलो समय हो. यसले गर्छ, तथापि, केहि प्रतिबन्धको साथ आउनुहोस्. विशेष गरी यदि तपाईं गर्भवती भएको बेला यात्रा गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने. बच्चा बोक्ने र बनाउने तपाईंको प्रकारको यातायात सीमित हुन्छ तपाईंको वरिपरि जानको लागि, विशेष गरी जब गर्भवती हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यात्रा गर्नुहुन्छ. एक उडान गर्न सक्दैन र यात्रा को धेरै अन्य प्रकारहरू गर्भवती भएको बेला जब महिनौं को एक निश्चित राशि मा, वा यदि तपाईं जटिलताहरू अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ. तपाईको गर्भावस्थाको यात्रा योजनामा ​​यी सबै समावेश गर्न निश्चित हुनुहोस्. तपाइँको गन्तव्यमा पुग्नको लागि एक धेरै सजिलो तरीका गर्भवती भएको बेलामा मार्फत रेल. ट्रेन कम्पनीहरूले अक्सर गर्भवती महिलालाई पूरा गर्दछ, यो एक यातायात को एक सबैभन्दा लोकप्रिय साधन बनाउने जब तपाईं यात्रा गर्भवती हुँदा.
रेल परिवहन भएको इको-मैत्री मार्ग यात्रा हो, विशेष गरी जब टीगर्भवती हुँदा क्रुद्ध. यस लेखमा बचत एक ट्रेन द्वारा ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको छ, सस्तो ट्रेन टिकट वेबसाइट संसारमा.
तपाईं सुरु हुनुभन्दा अघि
तपाईं सवारमा आफ्नो सानो एक संग आफ्नो यात्रा सुरु गर्नु भन्दा पहिले, गर्भवती हुँदा तपाईंको शरीर यात्राको लागि तयार गर्न केहि समय लिनुहोस्. सकेसम्म व्यायाम गर्न प्रयास गर्नुहोस्, यो हुनेछ निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको शरीर सबै भन्दा राम्रो आकारमा छ यात्रा को कठोरता सम्म बालुवा गर्न. गर्भवती भएको बेला यात्राले तपाईबाट धेरै लिन सक्दछ. अभ्यास तानेर, र तपाइँको कोर र खुट्टाहरूलाई बलियो बनाउँदै. यात्रा डिब्बामा सुतिरहेको छ प्राय: जसो तपाई प्रयोग गर्नु भन्दा धेरै विचलित हुन्छ, र तपाईंलाई गर्भवती भएको बेलामा आरामदायक हुन अतिरिक्त लचिलोपना चाहिन सक्छ.
पेरिस गर्न लन्डन
यात्रा गर्भवती हुँदा 1: तपाइँको डाक्टर संग जाँच गर्नुहोस्
गर्भवती भएको बेला तपाईं यात्रा सुरु गर्नुभन्दा पहिले, तपाईको कागजातमा जाँच गर्नुहोस् कि तपाई वास्तवमै यसको लागि सफा हुनुभएको छ. निश्चित गर्नुहोला कि गर्भवती भएको बेला तपाईं यात्रा गरिरहनु भएको छ रेल बाट र हावामा होईन, किनकी यसको परिणाममा ठूलो भिन्नता हुनेछ. उच्च जोखिम गर्भावस्था र जो तेस्रो त्रैमासिक मा धेरै ढिला हुन्छन् गर्भवती भएको बेला यात्रा गर्न पहुँच अस्वीकृत हुन सक्छ, त्यसोभए निराशाबाट जोगिनका लागि पहिले नै सफा गर्नु उत्तम हुन्छ. एक पटक तपाईं सबै स्पष्ट छ, तपाईंको पुस्तक रेल टिकट अनलाइन.
रोटरडम पेरिस गर्न
पेरिस गर्न ब्रसेल्स
टीगर्भवती हुँदा क्रुद्ध सुझाव 2: सावधानीपूर्वक योजना बनाउनुहोस्
हामी सबैलाई थाहा छ कि विवाहहरू र पार्टीहरू जस्ता घटनाहरू जहिले पनि तपाइँको सही समय फ्रेममा पर्दैन, especially if you are planning on traveling while pregnant. जहाँ सम्भव छ, तथापि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको यात्रा तपाईंको गर्भावस्थाको सबैभन्दा आरामदायक अंशसँग मिल्छ. पहिलो त्रैमासिक अक्सर हुन्छ मतली संग ग्रस्त, भोकको अभाव र सामान्यतया डरलाग्दो महसुस हुन्छ, जुन गर्भवती भएको बेलामा यात्राको लागि नराम्रो खबर हो. तेस्रो त्रैमासिक तब हो जब तपाई एक ह्वेल जस्तै अलि महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ, र कुनै पनि अवधिको लागि उभिँदा तपाईंको खुट्टा खस्न चाहन्छ. सुगन्धित टाउको थप्नुहोस्, निद्रा को अभाव, र बढ्दो हुर्काएको बच्चाको आन्दोलन चक्र उसमा र यदि तपाईं गर्भवती भएको बेला यात्रा गर्नुभयो भने तपाईंलाई धेरै असजिलो यात्रा हुन सक्छ. दोस्रो त्रैमासिक प्रायः तपाईको यात्रामा उत्तम समय हुन्छ. तपाईं अझै ठूलो हुनुहुन्न, र धेरै जसो केसहरूमा, मतली कम भएको छ. गर्भवती भएको बेला यात्रा गर्नु उत्तम हुन्छ यदि तपाईं पूरै समय खर्च गर्न चाहनुहुन्न भने, वा सुत्नुहोस्!
मिलान रोम गर्न
यात्रा गर्भवती हुँदा 3: तपाईंको आफ्नै तकियाहरू ल्याउनुहोस्
जब तपाईं गर्भवती भएको बेला यात्रा गर्नुहुन्छ आरामदायी हुनु सजिलो छैन. यो विशेष गरी सत्य हो यदि यो गर्भावस्था पछि अलि पछि हो. तपाईंको यात्रा को लागी आफ्नै मनपर्ने तकिया प्याक गर्न निश्चित गर्नुहोस्. तपाईंको आफ्नै तकियाहरू राख्नु गर्भवती भएको बेलामा अधिक आरामको ग्यारेन्टी मात्र दिंदैन, तर यसले तपाईंलाई कम तनाव महसुस गर्न मद्दतको लागि परिचितताको भावना पनि दिन्छ. गर्भवती भएको बेला यात्राले तपाईंको पछाडि बनाउन सक्छ, घाँटी, र धेरै धेरै तपाईको प्रत्येक अंगले दुखेको छ. सामना गरौ, गर्भवती हुँदा पनि धेरै तनावपूर्ण हुन सक्छ, त्यसैले सधैं प्रयास गर्नुहोस् चीजहरू सकेसम्म सजिलो बनाउनुहोस् जब तपाईं गर्भवती हुँदा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ.
बोलोना to भेनिस
टीगर्भवती हुँदा क्रुद्ध सुझाव 4: तपाइँको समय तालिकामा राख्नुहोस्
गर्भवती भएको बेलामा यात्रा प्रायः धेरै अप्रत्याशित ढिलाइहरूको साथ आउँदछ. तपाईलाई कहिले थाहा छैन तपाई आफ्नो यात्राको बिहान कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ, वा यदि तपाईंको शरीर गर्भवती भएको बेलामा यात्राको लागि केहि समय चाहिन्छ. सबै कुरा बढी तनावपूर्ण छ, र एक अक्सर ढिलो चलाउन सक्छ. तपाईंको रेल यात्राको अघि एक समय तालिका कोर्नुहोस्, र सम्भव भएसम्म यति धेरै समय थप्न निश्चित गर्नुहोस्. लक्ष्य छ कि पर्याप्त प्रारम्भिक हुन ढिलाइहरू जस्तै ट्राफिक वा अरू केहि गर्व गर्नुहुन्न भने यात्रा गर्दा हतार गर्नु पर्ने. निश्चित, तपाईंको ट्रेनको लागि वरिपरि बसेर पीडा हुन सक्छ, तर यो हडबड भन्दा अनन्तसम्म राम्रो छ, गर्भवती हुँदा, यो समात्न.
यात्रा गर्भवती हुँदा 5: खरिद गरेको खानामा भरोसा नगर्नुहोस्
सबै प्रकारका चीजहरूले तपाईंको पेट बन्द गर्न सक्दछ जब तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ. उल्लेख नगरीकन त्यहाँ सूची छ जब सम्म तपाईको खानाको खानाको रूपमा तपाईको हातले पाउनु हुँदैन. तपाईंको यात्रा योजनाको एक हिस्साको रूपमा आफैं तपाईंको आफ्नै खाना ल्याउँदा गर्भवती भएको बेलामा यात्रा गर्दा ती सबै मुद्दाहरूको बेवास्ता हुनेछ. जब तपाईं आफ्नै खाना प्याक गर्नुहुन्छ, तपाईलाई थाहा छ यसमा के छ, र ठ्याक्कै के आशा गर्ने. निश्चित गर्नुहोला कि कूलर बक्समा प्याक गर्नुहोस् वा केही अन्य इन्सुलेटेड प्याकेजिaging्ग गर्नुहोला जब गर्भवती भएको बेलामा चिसो वा तातो राख्न.
टीगर्भवती हुँदा क्रुद्ध सुझाव 6: ट्रिपल तपाईंको औषधि जाँच गर्नुहोस्
त्यो डूब भावना जब तपाइँले महसुस गर्नुहुन्छ कि तपाइँले एक महत्त्वपूर्ण औषधि पछाडि छोड्नुभएको छ जुन हामी मध्ये कोही पनि अनुभव गर्न चाहँदैनौं, विशेष गरी जब गर्भवती हुँदा यात्रा. जब तपाईं अपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं दैनिक जीवनको लागि विभिन्न औषधीहरूमा हुन सक्नुहुन्छ. यी तत्काल तपाईंको दिमागको अग्रभागमा पप हुँदैन जब गर्भवती भएको बेला यात्राको लागि प्याकिंग गर्दै. निश्चित गर्नुहोला कि ट्रिपल चेक मात्र गर्नुहोला कि गर्भवती भएको बेलामा यात्रा गर्न पर्याप्त औषधीहरू भन्दा बढी छ तर अरू कसैलाई पनि तपाईंको लागि जाँच गर्नुहोस्।.
गर्भवती हुँदा यात्रा गर्दै सुझाव 7: आफ्नो सामान उठाउनु हुँदैन!
गर्भवती हुँदा यात्राको बारेमा सोच्दा यो प्रायः बेवास्ता गरिन्छ. अक्सर हामी केवल एक सूटकेस वा एक झोला बोक्छौं यसलाई पूरा गर्न र बाहिरबाट. लगेज भारी छ, त्यसैले गर्भवती हुँदा यसलाई उठाउनु कुनै नम्बर हो! अरू कसैलाई पनि दिनुहोस् हात दिनुहोस् यदि सक्नुहुन्छ भने, अन्यथा गर्भवती भएको बेलामा तपाईंलाई मद्दत गर्न गार्डलाई तल झण्डा लगाउनुहोस्.
टीगर्भवती हुँदा क्रुद्ध सुझाव 8: एक्लै यात्रा नगर्नुहोस्
तपाई आफैंले यात्रा लिने योजना बनाउनु भयो भने पनि, सहकर्मी वा साथीसँग टाँस्ने प्रयास गर्नुहोस् जुन उही ठाउँमा जान आवश्यक छ. यात्रा गर्भवती हुँदा एक्लै तपाईंलाई ठूलो जोखिममा पुर्‍याउँछ. केहि गलत हुन सक्छ भने तपाईलाई कहिले थाहा छैन, त्यसोभए तपाईंलाई मद्दत गर्नको लागि तपाईंलाई त्यहाँ मित्रैलो अनुहार चाहिन्छ. जब तपाइँको यात्रा योजनाहरूमा निर्णय लिनुहुन्छ, कम्तिमा एउटा अन्य व्यक्तिलाई समावेश गर्ने प्रयास गर्नुहोस् जुन तपाईंसँग यात्रा गर्न तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ.
गर्भवती हुँदा यात्रा गर्दै सुझाव 9: केहि संगीत ल्याउनुहोस्
गर्भवती भएको बेला तपाई यात्रा गर्दै गर्दा तयार हुनुको पछाडिको सम्पूर्ण कुरा तनाव कम गर्नु हो. तनावले तपाईंको शरीरमा सबै प्रकारका अनावश्यक र अस्वस्थ प्रभावहरू निम्त्याउन सक्छ. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको संगीतमा तपाईंसँग केहि संगीत ल्याइएको छ. तपाईको हेडफोनमा पप गर्नुहोस्, र बस बस्नुहोस् र आराम गर्नुहोस् जब तपाईं आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ. सास फेर्न नबिर्सनुहोस्.
सुझाव 10: तपाईंको टिकट अग्रिम मा बुक गर्नुहोस्
निश्चित गर्नुहोला कि गर्भवती भएको बेला यात्राको लागि मात्र तपाईं टिकटहरू अनलाइन बुक गर्नुहुन्न, तर तपाईं पनि बचत ट्रेन संग सस्तो ट्रेन टिकट प्राप्त. उत्तम टिकटहरू लिने सम्बन्धमा तपाईको मनमा शान्ति छ भनेर निश्चित गर्दै, सकेसम्म अग्रिम यो काम गर्नुहोस्, सही ट्रेन टिकटहरू लिनु गर्भवती भएको बेलामा राम्रो अनुभव पाउन आवश्यक छ.
गर्भवती हुनु एक अद्भुत र कहिलेकाँहि डराउने अनुभव हो. मा एक ट्रेन सेव हामी तपाइँलाई तपाइँको यात्राको मजा लिन मद्दत गर्न चाहन्छौं, अगाडि योजना, र कुनै सम्भावित समस्याहरूबाट बच्नुहोस्. टीगर्भवती हुँदा क्रुद्ध रेलमार्फत त्यस्तो राम्रो अनुभव छ, र त्यो परिवर्तन हुँदैन किनभने तपाईं बच्चा अपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “10 गर्भवती हुँदा यात्राको लागि सल्लाहहरू” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र हामीलाई क्रेडिट दिन सक्छ यो ब्लग पोस्ट गर्न लिंक. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://embed.ly/code?URL = https://www.saveatrain.com/blog/tips-traveling-pregnant/ اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
europetravel गर्भवती रेल यात्रा travelingwhilepregnant TravelPregnant traveltips
ट्रेन द्वारा व्यापार यात्रा, रेल वित्त, रेल यात्रा सुझावहरू
रेल यात्रा फ्रान्स, रेल यात्रा जर्मनी, रेल यात्रा इटाली, रेल यात्रा स्पेन, यात्रा युरोप
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 जुलाई 2020अगस्ट 2020सेप्टेम्बर 2020अक्टोबर 2020नोभेम्बर 2020Dec 2020जनवरी 2021फरवरी 2021Mar 2021अप्रिल २०२१मे २०२१Jun 2021